Hallucination - वस्तुको उपस्थितिबिनाको आभाष : Mental Health
Hallucination – वस्तुको उपस्थितिबिनाको आभाष
Posted Date: 2013-08-16
कुनै एउटा वस्तुको उपस्थितिमा त्यसको आभाष विभिन्न इन्द्रिय मार्फत हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । उदाहरणको लागि भित्तामा भएको घडी आँखा मार्फत देख्नु, रेडियोको ध्वनि कानको माध्यमले सुन्नु, घामको तातो छालामार्फत अनुभव हुनु सामान्य आभाषका प्रक्रिया हुन् । यस लेखमा विभिन्न मस्तिष्कका रोगसंग (जसमा मानसिक रोग पनि पर्दछन) सम्बन्धित आभाष सम्बन्धि एक बिशेष लक्षण Hallucination को चर्चा गरिएको छ ।
मिथ्याभास मुख्यत दुइ प्रकारका हुन्छन – Hallucination र Illusion । उदाहरणको लागि – मानौ राति अंध्यारोमा तपाई हिडदै गर्दा पर एउटा लामो साँप सल्बलाइरहेको देख्नुहुन्छ, नजिकै गएर हेर्दा त्यो त निर्जीव डोरी रहेछ भने त्यस्तो आभाषलाइ Illusion भनिन्छ, अर्थात यस अवस्थामा तपाइले भएको कुरालाई अर्कै देख्नुभयो या ठान्नुभयो । Hallucination त्यस अवस्था मा भनिन्छ जब वस्तु या आवाजको उपस्थितिबिना नै आभाष हुन्छ । अर्थात Hallucination त्यो बेला भनिन्छ जब सम्बन्धित अंगबाट आभाषको लागि चाहिने वस्तुको अनुपस्थितिमा व्यक्तिलाई उक्त वस्तुको आभाष हुन्छ । जस्तै कतैबाट कुनै ध्वनि नआए पनि आवाज सुनिनु, बाहिरी वातावरणमा नभएको कुरा देख्नु आदि । यसलाई तलको उदाहरणले प्रस्ट पार्दछ ।
उदाहरण १. लामो समयदेखि रक्सीमा लत परेको बिरले दुई दिनदेखि रक्सी खाएको छैन । हिजो र अस्ति राति ऊ सुत्न सकेन । आज बिहानैदेखि उसको कुरामा निकै गडबडी छ । केही आकृति नभएको भित्तामा हेरेर ऊ फुटबल खेल भइरहेको छ र खेलाडीहरू बल संगसंगै दगुरिरहेका छन् भन्दै छ । अरुले त्यो भित्तामा केही छैन भन्दाभन्दै पनि ऊ एकोहोरो उही दृश्य देखिरहेको छ भन्दै छ ।
उदाहरण २. गत हप्तासम्म बिलकुलै राम्रो अवस्थामा रहेको विकास एक्कासि बेला बलेामा झ्यालबाहिर हेर्ने गर्छ । गएको केहि दिन देखि बाहिरबाट कोहि उसको बारेमा कुरा काटिरहेको आवाज प्रस्ट रूपमा आएको ऊ भन्ने गर्छ । तर ऊ बाहेक अरु कसैले त्यो आवाज सुनेकै छैन ।
माथिका दुई उदाहरणहरूले यस्ता मिथ्याभाष वर्णन गरिरहेका छन्, जसलार्इ अंग्रेजीमा Hallunication भनिन्छ ।
कहिलेकाही Hallunication सामान्य अवस्थामा पनि हामीलाई हुन सक्छ । हामीमध्ये धेरैले बेलाबेलामा हाम्रो वरपरबाट हाम्रो नाम बोलाएको जस्तो लागेको तर खोजी हेर्दा कतैबाट त्यस्तो आवाज नआएको अनुभव गरेकै कुरा हो । कहिलेकाहीं मात्र हुनु असामान्य होइन । तर यदि यस्तो लगातार भइरहन्छ या माथिका उदाहरणहरूमा वर्णन गरिएको जस्तै हुने गरेको छ भने त्यो अवस्था चाहिं असामान्य नै हो भनेर यकिनका साथ भन्न सकिन्छ ।
केहि शारीरिक तथा मानसिक रोगहरूमा Hallucination मुख्य लक्षणको रूपमा भेटिन सक्छ ।
मानसिक रोगमा Hallucination
स्किजोफ्रेनिया र अन्य साइकोसिस (पागलपन) मा ध्वनिको Hallucination प्रमुख लक्षण नै हुन सक्छ, जसमा लगातार प्रष्ट रूपमा मानिसहरू बोलेको आवाज आउन सक्छ । डिप्रेसन कडा हुँदा हुन सक्ने पागलपनमा समेत Hallucination हुन सक्छ । कडा रूपधारण गरेको Mania मा पनि यो लक्षण बेलाबेलामा भेटिन्छ ।
लागू पदार्थ र Hallucination
लागू पदार्थका दुव्र्यसनीहरूमा लागू पदार्थ लिएर लठ्ठ भइरहेको अवस्थामा तथा लागू पदार्थ छोडेको सुरुका केही दिनहरूमा Hallucination हुन सक्दछ । रक्सीको लत परेको व्यक्तिमा छोड्ने क्रममा दृष्टिको Hallucination प्रमुख रूपमा हुन सक्छ (माथिको उदाहरण) । तर यी व्यक्तिहरूमा आवाजको पनि Hallucination हुन सक्दछ । लागूपदार्थ दुर्व्यसनीह व्यक्तिमा Hallucination हुँदा सम्भवत यस्तो अनुभव लागु पदार्थले गर्दा भएको हो र साइकोसिस नै चाहिं होइन भन्ने अरु आधारहरू भेटिन सक्दछन् ।
अन्य मस्तिष्कका रोगहरु र Hallucination
दिमाग सुन्निने मेनेन्जाइटिस या इन्सेफलाइटिस जस्ता संक्रमण भएको अवस्थामा पनि Hallucination हुन सक्दछ । तर यी अवस्थाहरूमा सम्बन्धित रोगका अन्य लक्षण जस्तै ज्वरो आउने, बान्ता हुने, होस बेलाबेलामा हराउने जस्ता लक्षणहरूको उपस्थिति हुने कारणले पागलपन चाहिं होइन भन्न सकिन्छ । त्यस्तै छारे रोग र Hallucination को पनि आपसमा सम्बन्ध भेटिएको छ । कहिलेकाही मस्तिष्कमा ट्युमर भएको अवस्थामा पनि हुन सक्छ ।
Hallucunatuion किन हुन्छ ?
बाहिरी जगत् मा भएको कुरा देख्नु, सुन्नु वा अन्य तरिकाद्वारा महसुस गर्ने क्रम मा खास शारीरिक प्रक्रियाहरू हुन्छन – जसमा शरीरको सतहमा हुने अङ्गहरूदेखि स्नायु हुँदै मस्तिष्कसम्मलाई समाहित हुन्छन । बाहिरी जगत् मा उपस्थित भएका कुराहरूको सुचना स्नायुको सूचना प्रणालीमार्फत मस्तिष्कसम्म पुगेर सो वस्तु अनुसारको अनुभव हुने हुन्छ । माथिका अवस्थाहरूमा यिनै स्नायुको सूचना प्रणालीमा कुनै प्रकारको गडबडी उत्पन्न भएर बाहिरी जगतमा हुँदै नभएका कुरा हरु आभाष हुने हुन्छ । यी गडबडीहरू धेरैजसो अवस्थाहरूमा चाहिं मस्तिष्कमा नै खराबी उत्पन्न भएर भएका हुन्छन् । मस्तिष्कमा कुन भागमा खराबी उत्पन्न भएको छ सोही अनुसारको Hallucunatuion हुने हुन्छ ।
Hallucunatuion आफैमा एक रोग नभई एक लक्षण भएको कारणले जुन रोग संग सम्बन्धित छ सो रोगको उपचार संगै यसको निदान गाँसिएको छ ।
(मैले Hallucination को ठ्याक्कै नेपालि शब्द भेटिन । माथि भनिए जस्तै भ्रान्ति, दृस्टी/ध्वनि भ्रम, मिथ्यभाषले Hallucination, Illusion तथा Sensory Distortion सबैलाइ सामाहित गर्छन । तपाइले Hallucination को नेपाली शब्द भेटेमा कृपया खबर गर्नु होला (क्लिक गर्नुहोस)।
(सन् २००२ मा प्रकाशित लेख)
१८ अगस्त २०१३ मा प्राप्त एक पाठकको प्रश्न:
बस्तुको उपस्थिति ====== पढे। मलाई सोधि हाल्न मन लाग्यो। मलाई कहिले काँहि म कोहि सँग कुरा गरेको वा त्यो बेला भएको घटना वा इन्सिडेन्ट वा बाक्य ठ्याक्कै पहिला पनि भएको थियो जस्तो लाग्छ।
त्यो यस्तै केहि त हैन ??? के यो पनि रोग नै हो कि????
प्रश्न को लागि धन्यवाद । तपाईंले भन्नुभएको अवस्था अङ्रेजीमा deja vu भन्ने अवस्था सँग मिल्छ । यो hallucination होइन । यो कहिलेकांही मात्र हुन्छ भने वास्ता नगरे हुन्छ । लगातार या पटक्-पटक हुन्छ भने चाहिं यो असामान्य अवस्था पनि हुन सक्छ । असामान्य अवस्थाहरूमा चाहिं deja vu संगै अन्य लक्षण पनि हुन सक्छन् । तपाईंले कहीले कांही मात्र हुन्छ भन्नुभएको छ र साथ् मा अन्य लक्षण भएको लेख्नु भएको छैन् । त्यसैले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । ढुक्क हुनको लागि चाहिं एक पटक चिकित्सक लाई देखाउनु भए हुन्छ । तपाईंको शहर नजिकै कुन चिकित्सक छन् हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
यस् बारे छुट्टै लेख लेख्ने प्रयास गर्ने छौं ।